Qoysas duleedka Xudur u guuray si ay gargaar u helaan
Photo | Dad soo barakacay/Sawir/Muxyadiin/Ergo
Radio Ergo 30 September, 2017 BAKOOL
Qoysas u badan xoolo dhaqato ayaa soo degay duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool kadib markii gar-gaarkii loogu tala galay la gaarsiin kari waayay deegaanadii ay kasoo gureen sababo amni awgeed. Dadkan ayaa sheegaya in hadda isbedelku yimi noloshooda kadib markay caawimaad heleen.
Saddex kun iyo boqol qoys ayay gaarayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee kasoo barakacay tuulooyin hoostaga degmooyinka Ceelbarde, Rabdhuure, Tiyeeglow iyo Waajid. Deegaanada ayaa kamid ah meelaha ay sida daran u saamaysay abaartu sida uu Radio Ergo u xaqiijiyay Cabdullaahi Warsame Cali guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Xudur.
Qoysaskan ayaa dhinacyada Koonfur iyo Waqooyi ee Xudur ka samaystay 10 deegaan oo markii hore ahaa dhul aan la deganayn si ay gar-gaar uga helaan maamulka Koonfur Galbeed iyo hay’adaha deeqaha bixiya.
Ibraahim Axmed Maxamed waxaa isaga iyo qoyskiisu ay kasoo guureen deegaanka Ceelgaras oo ka tiran Waajid. Wuxuu Ergo u sheegay in abaartii kahor uu dhaqanayay 150 neef oo ari iyo Lo’ isugu jira. Xoolahaas ayaa abaarta ku dhammaaday halka qaarna uu xaraashay si qoyskiisu ugu noolaadaan, goormee xaraashay. Toddobo maalmood ayuu sheegay in xaaskiisa iyo Sagaal caruur ah oo ay dhaleen ay soo lugeeyeen kahor intaanay gaarin meel 8km u jirta Xudur oo uu degan yahay. Deegaanka uu kasoo guuray ayuu Ibraahim sheegay in mudo bil ah uu go’doon ahaa, gurmadkuna uu gaari waayay.
Muddo sideed bilood ah oo ay deganyihiin duleedka Xudur, ayuu sheegay Ibraahim in afar jeer la siiyay raashin isugu jira Bariis, Bur, Sonkor iyo Caano. Noloshooda ayuu tilmaamay in hadda sidii hore ay ka fiicantahay.
“Waxaan soo joogney annaga oo Laba beri ilmaha wax aan siino weyney, Degmada Waajid oo aan hoostagno la tagi karin, raashin kaaga imaan karin,xoola naga dhammaadeen,meesha keliya ee wax laga bixinayey Xudur ay ahayd sidaas ayaan ku doorbidney inaan halkan soo degno si raashin gargaar ah u helno”.
Bishii lixaad ee sanadkan ayaa ahayd markii ugu danbaysay ee qoysaskan ay heleen gargaar uga yimi Turkiga, waxay Radio Ergo u sheegeen in ay yaryaraystaan deeqda ay heleen inta ay ka helayaan mid kale.
Macalin Maxamed Cabdi oo kamid ah qoysas xoolaley ah oo neefafkii ay dhaqanayeen abaarta ku waayay ayaa sheegay in markii muddo lix bilood ah gargaar ay ku sugayeen degmada Ceelbarde oo ay waayeen ay ku khasabtay in ay u guuraan isaga iyo qoyskiisa oo kooban 8 qof meel10km Koonfur kaga beegan degmada Xudur. Halkaas oo bilo dhowr ah ay ku heleen kaalmooyin.
“Intii aan halkaas ku noolayn waxaa adkaa isu socodka degmooyinka, waxaa adkayd in aan helno biyo aan cabno, markay noloshu adkaatay ayaan ka cabsanay inaan gaajo iyo oon u dhimano”.
Sababaha ugu wayn ee maamulka Koonfur Galbeed, dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo hay’aduhu u gaari waayeen degmooyinka kale ee gobolka ayaa ah arimo la xiriia nabadgelyada iyo waddooyinka oo go’an.